5 Ebe kacha mma Pụrụ Iche na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Ebe kacha mma Pụrụ Iche na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Train Travel Hungary, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Travel Europe
Ma ị na-eme njem maka ngwụsị izu ma ọ bụ ezumike dị ogologo na Europe, ikwesiri iweputa oge iji zuru ike. Eserese bụ ụzọ dị mma iji zuo ike ma nwee mmasị na ụfọdụ saịtị na echiche ndị mara mma. Ya mere, iji nyere gị aka ibido n’oge ezumike Europe gị, anyị ejirila nkata wee kpochie nkata nke piki kacha mma na Europe. Naanị nọdụ ala, ma nụ ụtọ nlele a!
1. Pụrụtụ na Petrin Hill, Prague
Echiche na ikuku Petrin Hill ogige na-eme maka otu 5 kasị mma ntụpọ ntụpọ na Europe. Egwuregwu, emi odude ke Lesser Town, Petrin Hill bụ ogige a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma maa mma na-eleghara Prague Castle. Petrin na-enye echiche kachasị mara mma nke isi obodo, inwere ike ịrịgo elu elu ulo ahu n'ezie ngosi ndị mara mma nke obodo, castles, na àkwà mmiri.
Petrin Hill zuru oke maka picnic na Europe n'oge opupu ihe ubi, ọdịda ma ọ bụ ọkọchị. Mpempe akwụkwọ a ga-ele anya zuru oke pụtara na ọdịda na oge opupu ihe ubi na ọkọchị, osisi na ala niile ga na-ama ifuru, na-achakwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Naanị jidere onwe gị ụfọdụ scones na tomato site Iclọ ebe a na-eme Artic a ga-edozikwara gị ihe osise dị egwu na Prague.
Uzo esi aga na họtelu Petrin Hill?
Petrin Hill dị nso na Old Town na etiti obodo. Nwere ike ịga site na nje, tram ma ọ bụ bọs, dị ka ndị njem niile. ma, you nwere ike iji ụkwụ gaa Petrin Hill, gafere Charles Bridge rue Mala Strana na mgbidi Lennon. Ọ ga-ewe gị ihe dị ka otu awa ma ọ bụrụ na ihu igwe dị mma ma nwee ọpụpụ maka ọdịda anyanwụ ga-abụ njedebe dị mma maka ụbọchị nrọ a n'obodo.
2. Paipu na Osimiri Saxon Switzerland, Germany
Nnukwu osimiri, Snoo na-ada n'imi n'ihu, Na ahịhịa ndụ juru gburugburu gị, Saxon Switzerland ogige ntụrụndụ mba bụ ọmarịcha paradaịs. Na ụtụtụ dị umengwụ ma ọ bụ na njedebe nke ogologo njem, akwa Bastei bụ ezigbo ebe maka ọmarịcha pikinik.
Ọ bụrụ n ’ị banye n’ịgba egwu na ndị na-anụ ọkụ n’obi, ị ga - enwe obi uto ma iwere ezumike. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ibi ndụ mara mma na izu ike, a paireti n’akụkụ osimiri na Saxon Switzerland ga-akachasị maka ezumike ndị Europe gị.
Uzo esi aga na họtelu Saxon Switzerland?
Saxon Switzerland bụ naanị 30 Njem ụgbọ oloko na-esi na Dresden. Ya mere, kwakọba ihe Eierschecke, kọfị, tomato, na mkpụrụ osisi site na mpaghara ahịa ma gị niile eweela oge dị mma n'otu n'ime ebe ntụrụndụ kachasị mma na Europe.
Dusseldorf na Munich site Train
Dresden ji Munich site Ọjụ
Nuremberg na Munich site na Ọzụzụ
Bonn na-Munich site Train
3. Pikiniki N'ọdọ mmiri Na Lago Di Braies, Italy
Mmiri mmiri na-acha odo odo na elu ugwu na-atụgharị uche na ọdọ mmiri ahụ, echiche nke Lake di Braies na South Tyrol na Italytali ga-eji ihe ncheta ndị mara mma mara ụcha gị. Istali bụ heaven culinary, jikọtara ya na ọdọ mmiri ndị dị egwu na ugwu, ọ baghị uru ịkọwa ọtụtụ ihe kpatara ọdọ mmiri a dị n'elu anyị 5 kasị mma ntụpọ ntụpọ na Europe.
Ọ bụrụ n’inwere ike na-aga ịgbagharị na Dolomites, gburugburu lago di Braie ụbọchị ịnya isi dị mfe. Ya mere, gwụchaa n’ụbọchị ịtụnanya, ị nweta nkata site na Panini ma ọ bụ Pizza gị ma na-enwe mmasị na echiche nke ọdọ mmiri kachasị ukwuu na Dolomites.
Uzo esi aga M Lago Di Braie?
Lago di Braies bụ ụgbọ oloko si Bolzano pụọ, obodo kacha nso. Ọ na-eji ụgbọ oloko were ihe dị ka otu awa, ma ọ bụ i nwere ike ịchọta ebe obibi dị ebube nso.
Milan si Venice site na Ọzụzụ
Padua na Venice site na Train
Bologna gaa Venice site na Train
Rome na Venice site na Ọzụzụ
4. Pụrụtụ n’agwaetiti Na Margret Island, Budapest
Odikwa na mmiri Danube, n'etiti Buda na Pest, Margaret Island zuru oke maka ụkọ mmiri na Budapest. Agwaetiti ahụ bụ 2.5 km, ọkacha mmasị n’etiti ndị obodo maka ịkpa ọchị n’anyanwụ. Na mgbakwunye, enwere ahịa dị nso ebe ahụ, yabụ na ọ dịghị mkpa ị gwọọ ọrịa gị site n'obodo site na ụgbọ njem ọha. Just jidere ọkacha mmasị gị niile na obere nri obodo dị na ahịa wee ruo n'agwaetiti ahụ.
Enwekwara ubi Japanese na agwaetiti Margaret nke bara uru nleta tupu ma ọ bụ mgbe ọmarịcha foto gị dị ebube.
Uzo esi aga na họtelu Margaret?
Site na tram ma ọ bụ ụgbọ ala, Agwaetiti Margaret dị mfe inweta site na ndị njem ọha. Ntutu insider: Kaadị Budapest na-ewetara gị mgbakwunye pụrụ iche maka ụgbọ njem ọha na nkiri.
Train ji Vien ruo Budapest
Munich na Budapest nke Ọzụzụ
Graz gaa Budapest site na Train
5. Pikiniki na Champs De Mars Paris
Paris nwere ọtụtụ ogige mara mma na ebe a na-ahụkarị anya n'akụkụ Seine. Ebe kachasị mma na Paris dị mma na Paris dị n'akụkụ ebe a na-ahụ anya Champs de Mars.
Ọ bụ nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị n'etiti arrondissement nke asaa na ifflọ Eiffel. O zuru oke maka eserese na Paris ma na-enye oche kachasị mma maka ọdịda anyanwụ. Na mgbakwunye na odida obodo, ọ bụkwa otu n'ime 10 nlele kachasị mma na Eiffel Tower na Paris.
Kwa ezinụlọ ndị Paris na-anwụ n'oge ọkọchị na-abịa kpoo anyanwụ ma ọ bụ nwee ọmarịcha ọdịda nke ubi. Ọ dị jụụ ma na-enye ọmarịcha ọnọdụ maka ikiri ọkụ Eiffel Tower n'abalị.
Ya mere, dị njikere ijikọ baguette ọhụrụ, biambert, nkpuru ohuru, mmanya, gaa n’otu n’ime ebe kachasị mma isi eserese na Europe.
Uzo esi aga na họtelu Champs De Mars?
Can nwere ike iburu ụgbọ okporo ígwè ma ọ bụ RER. Naanị ịpụ na ọdụ Champ de Mars-Tour Eiffel.
Gagharị njem nwere ike iju gị ike ma na-agwụ ike n'ihi na anyị ga-achọ mgbe niile ịhụ ma hụ ihe niile. Europe nwere ọtụtụ ihe dị ịtụnanya na-agaghị echefu echefu ihe omume na echiche na-enye. Mgbe ị kwesịrị ịgbalịsi ike ịhụ ihe niile o kwere mee, mgbe ụfọdụ ịchọrọ ị were ya mfe. Inwe oriri na ọnicụacụ nri dị n'ime obodo bụ ụzọ dị egwu iji nyochaa obodo na nri, n’emeghị nzọụkwụ.
Amsterdam ka Paris site Ọzịza
Togbọ oloko na London ruo Paris
Rotterdam gaa Paris site na Ọzụzụ
Brussels na Paris site na Ọzụzụ
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịchọta tiketi ụgbọ ala kachasị ọnụ ala na ebe ọ bụla mara mma picnic dị na listi anyị.
You chọrọ itinye mgbagha blọọgụ anyị “5 Kachasị Ego Ego Na Yurop” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/ የሰማይ አካላት– (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
The-aghaghị Ime Europe Ahụmahụ Site Train
Train Travel France, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Zụọnụ Ndụmọdụ, Ingbọ njem njem Turkey, Train Travel UK, Travel Europe